HS:-Tan iyo markii kooxahii xooga ku heystay Hiiraan laga sifeeyey caasimada Hiiraan ee Belet Weyne waxey magaaladu soo martay marxalado kala duwan oo aaqirkii maamulka hada jira u saamaxeysa inuu wax badan ka qabto amaanka magaalada Belet Weyne oo uu dhawr jeer oo hore dilal qorsheysan ka dhacay.
Marka laga soo tago dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaq ah oo ay mararka qaarkood magaalda nawaaxigeeda ka soo qaadaan dhalinyaro wali aaminsan kooxda Shabaab hadane marka xaalada dhinaca kale laga eego waxaa magaalada ka socda horumar muuqda.
Magaalada ayaa hada ah mid nabad ah qaabka hada nabadgalyada loo sugo ayaa wax badan ka duwan qaababkii hore maadaama la howl galiyey dhamaan gudoomiyaashii xaafadaha kala duwan ee ay ka koban tahay magaalada. magaalada Belet Weyne waxaa ka socda horumar ay ishaadu qabaneyso marka aad u guur gasho xaalada guud sida ganacsiga, dhismayaasha guryaha iyo waliba dhinaca nadaafada.
Magaalada Belet Weyne oo horey ugu koobneyd 4 xaafadood hada waxaa ku darsoomay labo xaafadood oo waaweyn sida raadeerka iyo Nuur Xawaad oo marka aad aragto dhismooyinka iyo horumarka ka socda aadba isleetahay waa Belet Weyne cusub. sidoo kale waxaa magaalada dhismooyin casri ah ka wada qurba joogta oo iyagu sidey wadan wadan iskula joogaan u dhista amaba wada gata dhulweyn kadibna guryo isku eg ka dhista. dadka badankoodu waxey hada aad u daneeyaan duleedka magaalada siiba soonaha ay ku yalaan Jaamacada Hiiraan, xarunta Hiiraan Global Service iyo waliba agagaarka Garoonka diyaaradaha oo ah dhul taag sare ah oo ku xeeran amaba ka hooseeya dhulka buuraleyda ah ee u dhaxeeya janta Guundishe iyo Buurta Qowlad.
Marka aad eegto dhinaca siyaasada waxaa magaalada ka muuqda isbedel weyn kadib markii ay siweyn iskugu soo dhawaadeen waxgaradka ku sugan gudaha iyo maamulka cusub ee Hiiraan.sidoo kale bulshada Hiiraan ayaa hadal heynta ugu badan marka aad joogto goobaha lagu qaxweeyo ayaa ah qaabka uu noqon doona mamul goboleedka ay bulshada Hiiraan yeelan doonto mustaqbalka dhaw.
Bulshada ku dhaqan magaalada Belet Weyne ayaa u muuqda kuwo hada siweyn ula shaweynayo maamulka cusub iyagoo bogaadiyey madaxweynaha kumeel gaarka ah ee Hiiraan Cabdifaraah Hasan Aftah oo ay ku amaaneen inuu hada siweyn ugu xiran yahay aadna ula tashado waxgaradka gobolka Hiiraan ku nool.isbedelka la taaban karo ee dhinaca siyaasada ee ka muuqda maamulka cusub ee ka arimiya Hiiraan ayhaa ah hadal heynta ugu badan reer Hiiraanka ku nool gudaha iyo dibada.
Dhinaca kale waxaa magaalada ka socda qaban qaabada xaflad weyn oo lagu soo bandhigayo labo bus oo ay jaaliyada qurbaha u iibiyeen ardeyda jaamacada Hiiraan taasi oo laga yaabo in ay dhawaan xariga ka jaraan masuuliyiin ka socota maamulka iyo madaxda jaamacada HU.
Isku soo duuboo Hiiraan ayaa lagu wadaa inuu yeelan doono maamul goboleed ay bulshada Hiiraan gacantooda ku soo dhistaan kuna yimid rabitaankooda kaasi oo ay diyarintiisa iska gaashanayaan qurba joogta iyo maamulka hada gacanta ku haya caasimada Hiiraan ee Belet Weyne.
Aragtiyo kala duwan oo durbaba laga bixinayo qaabka uu noqon doono mamul goboleedka cusub ayaa intooda badan u muuqda mid yididiilo iyo horumar u horseedi doona bulshada Hiiraan oo iyagu dhinackasta ah bulsho isku filan.
Hiiraan waxuu noqonayaa labo gobol iyo ka badan. magaca Hiiraan waxuu noqon doona lama taabtaan mana jiri doono magaca aan aheyn midka Hiiraan oo ka shaqeyn doono Hiiraan. labada gobol ee ugu horeeya ee uu maamulku ka koobnaan doono waa Koofurta Hiiraan oo ay caasimad u tahay Bulo Burde iyo waqooyiga Hiiraan oo ay Belet Weyne caasimad u tahay. barlamaanka maamul goboleedka ayaa waxaa uu noqon doonaa ugu badnaan 63 xubnood oo mudane baarlamaan ah. waxaa baarlamanaka soo xuli doono golaha duqowda Hiiraan. kadibna waxey dooran doonaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka, magaca maamul goboleedka waa Hiiraan State sidaasina waxaa yiri mid ka mid ah aqoonyahanada reer Hiiraan ee ku sugan qurbaha,fikirkaan oo ah midka ugu badan ee Hiiraan yaalo maanta.
Isku soo duuboo arinta kaliya ee maanta qatarteeda leh waa gawaarida xamuulka ah ee isticmaala labada Buundo ee ay caanka ku tahay magaalada Belet Weyne sida Buundo Liiq Liiqato iyo Buundo weyn oo ay malintii horey iyo gadaal u maraan gawaari sida xamuul aad uga tan badan oo laga yaabo in ay soo dedejiyaan iney bur buraan buundooyinkaas muhiimka u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka iskaka kala koosha gudaha magaalada maadama ay magaaladu aad u weyn tahay.
Maamulka hada ka arimiya Hiiraan oo ay hogaaminayaan rag u badan dhalinyaro dagaal dheerna ku soo jiray mudo dhawr sano ah ayaa hadii ay sii wadaan amaba xoojiyaan la tashiga waxgaradka iyo sugida amaanka ay u badan tahay iney siyaasada Hiiraan heer fiican ka gaaraan.
· admin on May 07 2012 01:31:16 · 0 Comments · 2741 Reads ·
14,581,113 unique visits